Ajụjụ - Ịdabere metal Resource CO., LTD.
Gburugburu / okirikiri welded Steel Pipe
Square & akụkụ anọ Steel Pipe
Nga kpaliri Steel Pipe
Nga kpaliri Now & okirikiri welded Steel Pipe
Nga kpaliri Square & akụkụ anọ Steel Pipe
Hot Itinye kpaliri Steel Pipe
Gburugburu Steel Pipe
Now Bar / oruru Steel Bar
Kemeghi Jack Base
Scaffolding Couplers & Ngwa
Hot akpọrepu Steel mpempe akwụkwọ
Oyi akpọrepu Steel mpempe akwụkwọ
Steel eriri igwe
Ị factory ma ọ bụ trading ụlọ ọrụ?
Ee, anyị bụ factory na Tianjin nke china site n'afọ 2001. Anyị nwere ike na-enye gị factory price ozugbo.
Nwere ike ị na-enye ndị samples?
N'aka, ma ọ bụ naanị n'ihi na nkịtị nha, na ibu ga-akwụ ụgwọ site na gị.
Gịnị bụ gị MQO?
1tons, ọ dị mma maka n'ùkwù n'ùkwù.
Ị nwere stockist ibu?
Ee, ma ị hapụ m ka m nha gị mkpa, ka m na-elele ya n'ihi na ị.
Ma ọ bụ L / C na n'anya ma ọ bụ ndị ọzọ nwere ike ịbụ okwu
Hi-Tech Ozi Square C-909, Nankai District, Tianjin China